क्यालिफोर्नियाको सेन्ट्रल उपत्यका अर्को सिलिकॉन घाटी बनिरहेछ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी बजार समाचार
अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 27, 2021 जेफ रोमेरो ब्लग, व्यापार, क्यालिफोर्निया, विशेष समाचार, प्रविधि
मोडेस्टो, क्यालिफोर्निया टेक हब भएको छ।
"हामीले विगत २- years वर्षमा सेक्र्यामेन्टो क्षेत्रमा अधिक र अधिक प्रविधि कम्पनीहरूले देखेको देख्यौं।"
यसको मतलब सैन फ्रान्सिस्को फस्टाउन जारी छैन भन्न खोजेको होइन।
आउँदो वर्षहरुमा अर्को टेक हब (हरू) बन्न उत्तरी क्यालिफोर्नियाको भित्री शहरहरूमा नजर राख्नुहोस्।
खाडी क्षेत्र बाट शिफ्ट
बे क्षेत्र, फेसबुक, ट्विटर र गुगल जस्ता टेक्नोलोजी राक्षसहरूको घर, सजिलै बस्नका लागि सबैभन्दा महँगो ठाउँहरू मध्ये एक हो। किनभने बस्ने लागत यति धेरै छ, रोजगारदाताले प्रतिभाको लागि एक प्रीमियम तिर्नु पर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
यो सही कारणका लागि, धेरै प्रविधि कम्पनीहरूले नयाँ प्रतिभाको स्रोतको रूपमा केन्द्रीय उपत्यका जस्तो राज्यको अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्दैछन्। यदि प्रतिभा केन्द्रीय उपत्यकामा जत्तिकै राम्रो छ र तलब चाहान्छ जुन ओकल्यान्ड वा स्यान फ्रान्सिस्को भन्दा धेरै कम छ भने, किन छैन? कम्पनीहरू पैसा बचाउन तयार छन्, जबकि प्रतिभा र परम्परागत रूपमा कृषि कार्य परिचित क्षेत्रको स्थानीय अर्थव्यवस्था को मद्दत।
परिवर्तन ईन्धन के हो?
कोविड १ ले गत बर्षमा नियोक्ताहरूका लागि धेरै समस्याहरू प्रस्तुत गर्‍यो भने यसले आफ्नो स्किसेट विस्तार गर्न वा नयाँ क्यारियर खोज्ने व्यक्तिको लागि विभिन्न अवसरहरू पनि प्रस्तुत गर्‍यो। र सबैभन्दा बढि-मांग क्यारियर मध्ये एक अब सूचना प्रविधिमा छ। सूचना प्रविधि (आईटी) ले कम्प्युटर प्रोग्रामिंग, सफ्टवेयर ईन्जिनियरि,, वेबसाइट डिजाइन, मोबाइल अनुप्रयोग विकास र अधिक धेरै सहित धेरै क्षेत्रहरू समेट्छ। गत बर्षमा यी सीपहरू आवश्यक साबित भए किनकि धेरै व्यवसायहरू र राज्य-संचालित विभागहरूले आफ्नो अपरेशन अनलाईनमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, छिटो नयाँ प्रविधि अपनाएर प्रतिभालाई सफल हुनको लागि आवश्यक छ।
यस पालीलाई मान्यता दिँदै, मोडेस्टोको बे व्ह्याली टेकका प्रशिक्षकहरूले व्यापक अनलाइन कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेर थप विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनको लागि उनीहरूको अभियान सुरू गरे। खाडी उपत्यकाको नि: शुल्क कोडिंग कार्यक्रम आईटीको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्यक्ष प्रशिक्षकहरूद्वारा सिकाइएको course-महिना कोर्स हो। पाठ्यक्रमले कम्प्युटर प्रोग्रामिंग, सफ्टवेयर विकास र वेब विकासमा प्रयोग हुने विभिन्न भाषाहरू समावेश गर्दछ। गत वर्ष पूर्ण रूपले अनलाइन हुनुको लागि कार्यक्रममा संक्रमण भएदेखि, गैर-नाफामुखी स्कूलले १०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई सिकाएको छ। र सबै भन्दा राम्रो, बे उपत्यका टेकले खाडी क्षेत्र मा नियोक्ताहरु संग काम गर्दछ र पछाडि तिनीहरूलाई चाहिने प्रतिभा प्रदान गर्न। विद्यार्थीहरूले क्यारियर अवसरहरू र कम्पनीहरूले वास्तविक-विश्व अनुभवको साथ प्रतिभा फेला पार्दछन्।
प्रशिक्षित विद्यार्थीहरूको एउटा समूहले सान फ्रान्सिस्को, ओकल्यान्ड र त्यसपछिका कम्पनीहरूलाई मात्र मद्दत पुर्‍याउँदैन, यसले मध्य घाटीको स्थानीय अर्थव्यवस्थामा नयाँ प्रकाश पनि दिन्छ।
स्थानीय अर्थव्यवस्था लाई सहयोग गर्दै
प्रशिक्षित विद्यार्थीहरूको एउटा समूहले सान फ्रान्सिस्को, ओकल्यान्ड र त्यसपछिको कम्पनीहरूलाई मात्र मद्दत गर्दैन, यसले मध्य घाटीको स्थानीय अर्थव्यवस्थामा नयाँ प्रकाश पनि दिन्छ। अधिक रोजगारदाताहरूले खाडी क्षेत्र बाहिर टेलेन्ट भर्ती गर्ने विचार अपनाएपछि, तिनीहरूले पनि मोडडेस्टो जस्ता शहरहरूमा अफिसहरू सार्न शुरू गर्नेछन्। यो प्रवृत्ति केवल मध्य घाटीमा मात्र नभई स्याक्रमेन्टोमा पनि रहेको छ।
"हामीले विगत २- years वर्षमा सेक्र्यामेन्टो क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै प्रविधि कम्पनीहरूले देखेको देख्यौं," टोम बेकनले भने बेकन वाणिज्यिक घर जग्गा। "सान फ्रान्सिस्कोका कम्पनीहरूलाई थाहा छ उनीहरू स्याक्रमेन्टो वा स्टकटनमा सञ्चालन गरेर बचत गर्न सक्दछन्, र त्यसो गरेर उनीहरूले धेरै पैसा बचत गरिरहेका छन्।"
खाडी क्षेत्रबाट बाहिर सर्ने सम्भावना केन्द्रीय उपत्यका र स्याक्रमेन्टोमा जारी रहनेछ जबसम्म बे भ्याली टेक जस्ता स्कूलहरूले प्रतिभा उत्पादन गर्न सक्दछन्। यसको मतलब सैन फ्रान्सिस्को फस्टाउन जारी छैन भन्न खोजेको होइन। तर हामी सम्भवतः धेरै कम्पनीहरूले देख्दछौं कि उनीहरूले सिलिकॉन भ्याली र बाहिर कम सञ्चालन गर्न सक्ने महसुस गर्छन्। आउँदो वर्षहरुमा अर्को टेक हब (हरू) बन्न उत्तरी क्यालिफोर्नियाको भित्री शहरहरूमा नजर राख्नुहोस्।
क्यालिफोर्निया सांप्रदायिक समाचार अर्थव्यवस्था अनलाइन कोडिंग वर्गहरू प्रविधि
जेफ रोमेरो एक डिजिटल मार्केटर र एसईओ पेशेवर हो। उहाँ ओक्टिव डिजिटलका सह-संस्थापक हुनुहुन्छ र विभिन्न ग्राहकहरूको सामग्री प्रकाशित गर्नुहुन्छ।